सपनाको चिहानबाट - इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरित् | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home सिर्जना कथा / लघुकथा कथा डबली सपनाको चिहानबाट – इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरित्
सपनाको चिहानबाट – इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरित्
on: भाद्र १२ , २०७७ शुक्रबार- ०६:३४
प्रतिमा दिदीको दु:ख र हैरानी देखेर म आफै हैरान र दिक्क भएको छु । यो उमेरमा आएर पनि अब यत्तिको भागदौड गर्न छाडिदिनुस भनेको दिदीलाई पटक्कै लाग्दैन । दिदी आफ्नै जिद्दीमा अडिनु हुन्छ, कहिले बिहानको चार बजे घरबाट निस्केको मान्छे राति गाडी नपाएर अलपत्र परेपछि केटाहरु बाइक लिएर लिन जानुपर्छ । कहिले भोकै, कहिले प्यासै हिँडेको हिँड्यै तैपनि चेत आएको हैन । आफू हिँडिरहेको बाटोलाई बदल्ने सोंच आएकै हैन, उहाँले प्रयास पनि गरेकै हैन ।
यो भागदौड, यो समर्पण र यो योगदानले दिदीलाई के नै दियो र ? रातोदिनको हण्डर, जीवनभरिको ठक्कर र एक्लोपनको पीडा बाहेक केही पनि त दिएन । कत्ति भनिसकेँ, घरैमा बसेर लेख्नुहोस, साथीभाइहरुसँग भेटघाट गर्न मन लाग्यो भने मिलेसम्म घरैमा बोलाउनुस्, आउने साथीभाइहरुलाई के खुवाउन मनलाग्छ भन्नुस, बुहारीहरुले पकाई दिइहाल्छन । कहिलेकाहीँ बाहिर जान मन लागे भदाहरुले बाइकमा राखेर लगिदिहाल्छन भन्यो दिदीले सुने पो । विचार, सिद्धान्त, पार्टी र देशको मुहार फेर्ने सपना बोकेर हिँडेको मान्छे उहाँ, साँच्चै भन्ने हो भने उहाँले सपना पनि यिनै कुराको देख्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । एक डेढ महिना भयो दिदीलाई झन् असारको पन्ध्र आएजस्तो भएको छ । खै, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो बिहानै हिँडेको मान्छे रात नपरी घर फर्किने हैन । दिनभरि न राम्रोसँग खानु छ, न पानी पिउनु छ । घर आइसकेपछि अनि यो भयो, त्यो भयो, यहाँ दुख्यो, त्यहाँ दुख्यो भन्यो, स्याहार गर्ने बुहारीहरूलाई हैरान । तैपनि भाइबुहारी र भदाबुहारीहरुले सासु हैन आमालाई झैँ स्याहारेकै छन् ।
“के काममा दौडिरहनु भएको छ, दिदी , रात दिन ?” आज बिहान दिदी घरैमा भएकोले चिया पिउने बेलामा मैले सोधेँ । मेरो प्रश्न जवाफ दिनलाई दिदीले आनाकानी गरे पनि मैले कर गरेपछि भन्नुभयो, हेर्न, त्यै पार्टीको लागि काम गर्दागर्दै तेरो भिनाजुको ज्यान गयो, पार्टीकै काम गर्दा एउटा भएको मेरो जवान छोरो पनि रहेन । म रातदिन पार्टीकै लागि खटिरहेकी छु तर अहिले आएर सत्तामा भएको पार्टीले वास्तै गर्दैन । नेताहरुले पनि अचेल त नचिनेजस्तो पो गर्छन, भेट दिनै गाह्रो मान्छन । पार्टी सत्तामा गएको बेलामा पनि मजस्तो कार्यकर्तालाई पार्टीले नसंझिने हो भने कहिले सम्झिने हो त भनेर नेताहरुलाई कराउदै हिँडेकी नि ।”
“ह्या दिदी पनि, पार्टी नै अर्कालाई लगेर बुझाउनेहरुले अब तपाईका लागि केही गर्लान् भनेर नसोचे हुन्छ । देश र जनताका लागि देखाएको सपनाबाट आफै भाग्नेहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्छन्, अरु केही गर्दैनन् । भो, दौडिन पर्दैन, तपाई लेख्न पढ्न रुचाउने मान्छे, लेख्नुस, पढ्नुस, किताब निकाल्नुस । बुहारीलाई मन परेको खानेकुरा पकाउन लाएर खानुस, साथीभाई बोलाएर ख्वाउनुस, भो अरु व्यर्थैको दु:ख नगर्नुस् दिदी ।” मेरो कुरालाई दिदीले चुपचाप सुनिरहनु भयो । निकै बेरसम्म केही बोल्नु भएन । त्यसैले मैले नै भने, ” हेर्नुस् अब तपाई सत्तरी बर्ष पुगिसक्नु भयो, दिनभरि भोकै प्यासै हिड्नु हुन्छ, कतै भ्वाक्कै लड्नु भयो भने , तपाइको पार्टीका मान्छेले तपाईलाई हेर्छन, हेर्दैनन् । आफ्नो स्वास्थ्य र उमेरको पनि ख्याल गर्नुस दिदी, मैले भनेको मान्नुस् ।” मेरो कुरामा दिदीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन ।
म बुझ्छु दिदीको इच्छा, चाहना र रहरका कुरा । दुई दर्जनभन्दा बढी साहित्यका पुस्तक लेखिसकेको मात्र दिदीको योग्यता र क्षमता हैन । कथा, कविता, उपन्यास लेखनमा मात्र नभएर दिदीले पार्टीको सांस्कृतिक फाँटमा रहेर गीत संगीतको माध्यमबाट पनि सेवा गरेको ती नेता भनाउँदोहरुलाई कसो थाहा नहोला त ? पार्टीमा प्रतिमा दिदी, भिनाजु र भान्जाको ठूलो लगानी छ । एउटा पार्टीका लागि भिनाजु र भान्जाले आफ्नो जीवनको बलिदान दिएका छन्, कसका लागि ? हिजोका दिनमा फाटेको चप्पल लगाउने नेताहरुले आज प्राडो चडून् भनेर हो ? जनतालाई देखाइएको सपनालाई रातारात कुल्चिएर जनताले गरेको बलिदानको बेदीमा आफ्नो शीशमहल ठड्याउँन् भनेर हो ? देशको मुहार फेरिनेछ, जनताले सुखको श्वाश फेर्न पाउनेछन भनेर गरिएको संघर्ष, बलिदान र सहादत आजको मतिभ्रष्ट दिन देख्नकै लागि हो त ? जताततै लुट, भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ । देश र जनताका लागि भनेर गरिएको युद्ध र आन्दोलन त अब एकादेशको कथाजस्तो लाग्न थालिसक्यो । हजारौँ सहिदको अवदान सम्झिँदा पनि हुने पीडाको बर्णन गरेर साध्य छैन । उमेरमै श्रीमान र जवान छोरो गुमाएकी प्रतिमा दिदीलाई अझै पनि यिनै नेताप्रति भर छ । त्यही पार्टीप्रति बिश्वाश छ जसले आफ्नो पार्टी लगेर बिरोधी कित्तामा बुझाएर ऊ चाहिं सत्ताको नजिकबाट आउने मुतको न्यानो तापेर कहीँ केही नभएझैँ मुस्कुराइरहेको छ ।
“कमरेड, पार्टी सरकारमा छ । मेरो र मेरो परिवारले यो पार्टीका लागि गरेको योगदानको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्यो । म सत्तरी बर्षको भैसकेँ, म पचास पचपन्नको मात्रै भए पनि यत्ति हत्ते गर्ने थिईन । मेरो योगदान, योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि, अब पनि मलाई पार्टीले सम्झिएन भने कहिले सम्झिने ? मैले सभासद, मन्त्री, राजदूत खोजेकी हैन । तर प्राज्ञ सदस्यका लागि चै यसपटक मलाई पार्टीले सम्झिनु पर्छ भन्ने हो, कमरेडको के विचार छ ? संस्कृति बिभाग प्रमुख हरिरामसँग मैले स्पष्ट भनेकी छु, भाइ । उनले हुन्छ पनि भनेका छन् ।” आज पो दिदीले कुरो खोल्नु भयो । तर मलाई पटक्कै विश्वाश छैन, जनतालाई धोका दिने पार्टी र त्यो पार्टीको नेताले मेरी सोझी दिदीलाई न्याय गर्ला भनेर ।
पार्टीमै नलागे पनि लाग्नेहरुको कुरा सुनेर र पत्रपत्रिका पढेर पनि कुन पार्टी कस्तो भन्ने कुरा सामान्य सचेत नागरिक सबैलाई थाहा छ । दिदी आवद्ध पार्टीले त असल कार्यकर्तालाई चिन्नै छाडिसक्यो भनेर पत्रपत्रिका सामाजिक संजाल जताततै ब्याप्त छ । यस्तो अवस्थामा कुन चै कमरेड हो त्यो दिदीलाई आश्वाशन दिने, बरु उसले दिदीलाई आश्वाशन नदिएको भए हुने थियो किनकि त्यो आश्वाशन पूरा हुन्छ जस्तो मलाई चै लाग्दैन । आशा पाएर निराश हुनुजत्तिको पीडा अर्को के हुनसक्छ र ?
ब्यापारको काममा भएको चापले थुप्रै दिन भयो दिदीसँग बसेर कुरा पनि गर्न पाएको छैन । केही काम पर्यो भने दिदी पनि भदा संयमलाई भन्न रुचाउनु हुन्छ, बुहारी स्वस्तिकासँग पनि दिदीकी मिल्ती नै छ, तर उहाँको कुरा भदा संयमसँग नै बढी मिल्छ । दुईजना फुपू भदा भन्दा पनि आमाछोरा जस्ता छन् । हुन त प्रतिमा दिदीमा सबैसँग मिलेर बस्नसक्ने क्षमता र गुण पनि छ ।
“दिदी, त्यै कामका लागि दौडीरहनु भएको हो ?” मेरो प्रश्नको जवाफमा हो भन्ने इशारा गर्दै दिदी संयमसँग बाइकमा घरबाट निस्किनु भयो । आँखामा पावरको सेतो चस्मा, सुतीको सारी र तानमा बुनेको एउटा बुट्टे झोला यही नै दिदीको परिचय हो । भिनाजु र भान्जा बितेपछी दिदीले रमाएर रंगीन लुगा लगाएको, गीत गुनगुनाएको वा रहर मानेर मिठो भोजन गरेको कम्तिमा मलाई थाहा छैन । उनको श्रद्धा, समर्पण र केन्द्रबिन्दु भन्नु नै पार्टी नै हो । खै, यत्तिको समर्पित कार्यकर्तालाई दिदीको पार्टीले कत्तिको न्याय गर्ने हो, हेर्न बाँकी नै छ ।
तीनवटा एकेडेमी प्राज्ञबिहीन भएर महिनौँ खाली बसेको कुरा पत्रपत्रिकाले लेखेको लेख्यै छ । खै कहिले सदस्यहरुको पूर्ति गर्ने हो ? दिदीको हण्डर कहिले सक्किने हो ? पार्टीका लागि जिउज्यान दिने कार्यकर्ताहरु लाई पाखा लगाएर पार्टीमा नवप्रवेशीहरुकै हालीमुहाली छ भन्ने सुन्छु । दुई तिहाइको सरकारले नत: महंगी नियन्त्रण गर्न सकेको छ नत: भ्रष्ट भनेर स्पष्ट चिनिएकाहरुलाई कारवाही नै गर्न सकेको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारबाट जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यो पूरा हुने लक्षण पटक्कै देखिएन । सत्तामा बस्नेहरुले गफ गरेजस्तो काम पनि गरेर देखाउन सकेको भए जनताको चित्त बुझ्थ्यो होला, तर उखानटुक्का भनेर मात्रका देश कसरी समृद्ध र जनता कसरी सुखी हुन् सक्छन् र ? कति सरकार होली वाइनको रसमा नब्युँझिने गरी निदाएको त हैन ?
“दिदी, कत्ति चिन्ता गर्नु हुन्छ ? भो, आशा नगर्नुस, देश बनाउछौँ, जनतालाई सुखी बनाउछौँ भन्नेहरु आफै समृद्ध र सुखी हुने बाटोमा हिँडीसकेपछि अब पनि तिनले तपाई हाम्रा लागि केही राम्रा काम गरिदेलान भन्ने आशै नगर्नुस, आशा नै नगरेपछि निराश हुनु पनि पर्दैन ।” राजनीतिमा खासै चासो नराख्ने मेरी श्रीमती स्वस्तिकाले पनि आज खै किन हो दिदीलाई राम्रैसँग पो सम्झाइन् । मलाई अचम्म र खुसी सिस्नुको पोलाइमा झ्याम्मै लाग्यो ।
“स्वस्तिका, हन आज त तिमीले पनि दिदीलाई सम्झाउन पो थाल्यौं त ।” मैले ठट्टा गर्दै भनेँ ।
“दिदीको धपेडी देखेर मलाई नै गाह्रो भैसक्यो, तेसैले दिदीलाई सम्झाकी नि ।” प्रतिमा दिदीलाई चियाखाजा खान आग्रहगर्दै स्वस्तिकाले भनिन् ।
“खै, अब दिदीको जे विचार । अनि दिदी यो प्राज्ञहरुको निर्णय कहिलेसम्म हुने हल्ला छ त ?”
“आज भोलि नै हुन्छ भन्छन ।” यो विषयमा दिदीले अरु कुरा गर्न नचाहेको बुझेपछि हामी आ-आफ्नो कामतिर लाग्यौँ । ठूलो छोरा सूचक र बुहारी तृष्णा पनि दिदीको वरिपरी बसेर खै के कुरा गर्दै हाँसिरहेका थिए । । म चामलको आफ्नै होलसेल पसलतिर लागें । खाना पनि म पसलमै खान्थें , पसलमा काम गर्ने केटोको हातमा स्वस्तिकाले नियमित रुपमा पठाउने गरेकोले खाना खानै भनेर म दिउँसो घरमा आइरहन्न ।
“ए संयम, फुपूको सदस्य बन्ने कुरा टुंगो लाग्ने त आज हैन र ?’ कलेजपछी सिधै पसलमा आइपुगेको संयमलाई मैले सोधेँ ।
“खै बाबा, फुपूले केइ भन्नु भा’ छैन ।’
हामी बाउछोरा राति घर पुग्दा दिदी खाना खाएर सुतिसक्नु भएको रहेछ । हनहनी ज्वरो आएकोले स्वस्तिकाले जचाएर औषधि पनि खुवाई सकिछिन । भोलि बिहान पो दिदीको सन्चो बिसन्चो सोध्न उनको कोठामा पसेको त दिदी चिया पिउँदै हुनुहुँदो रहेछ ।
“बर्बाद भैहाल्यो नि संगम । हाम्रो पुरै परिवारको लगानी र योगदानको पार्टीले रौँ बराबर पनि कदर गरेन ।” दिदीले दिक्क मान्दै भन्नुभयो ।
“किन दिदी, के भयो र ?”
“प्रज्ञामा प्राज्ञहरुको नियुक्ति भयो तर तीनवटै प्रतिष्ठानमा मेरो कतै नाम छैन ।”
“यिनले यही गर्छन भन्ने थाहा नै थियो नि दिदी , भो आशा नगर्नुस, भागदौड नगर्नुस भन्दा तपाई मान्नुहुन्न दिदी ।”
“कुरा सुन्न संगम, म भन्दा योग्यहरू आएको वा ल्याएको भए त ठिकै थियो तर म जस्तो जिन्दगीभरि कलम चलाएको , विचारको खेतीगर्दै पार्टीमा अथक योगदान गरेको मान्छेलाई लत्याएर प्राज्ञ कस्तालाई बनाएका छन् भन्दा आफ्नो फरियाका साइनो पर्नेलाई, पार्टीको हण्डी खानेलाई र जिन्दगीभरि बोर्डिंग स्कुल चलाएर बस्नेहरु पो प्राज्ञ बनेर आएका छन्, गाइड लेख्नेहरु आएका छन् । अझ त्योभन्दा पनि बिडम्बना त जिन्दगीमा के के लेखेको छ भनेर अत्तो पत्तो नभाको मान्छे समेत प्राज्ञ बनाएर ल्याइएछ, कोइ तीन तीन पटक प्राज्ञ भएर दोहोरिएका हैनन् तेहरिएका छन् । भाइ, म प्राज्ञ नभएकोमा चिन्ता वा दु:ख मनाउ छैन, तर यिनले मेरो परिवारको योगदानसमेत बिर्सिएछन्, यसमा साह्रै दु:ख लागेको छ ।”
दिदीलाई सम्झाएर म र स्वस्तिका आ-आफ्नो कामतिर लाग्यौँ । दुईचार दिन दिदी कतै पनि जानु भएन, पार्टीले थुप्रै साहित्यकार-कलाकारहरुलाई सम्मान गर्नेक्रममा प्रतिमा दिदीलाई पनि सम्मान गर्ने भयो, त्यही व्यहोराको चिट्ठी पनि आयो । तर दिदी जानु भएन । उहाँ घरैमा बसिरहनु भयो । त्यसको भोलिपल्ट दिदी एक्लै घरबाट निस्किनु भएछ एकैक्षणका लागि । दिदीलाई ननिको लाग्ला भनेर हामी कसैले पनि किन र कसो भनेर सोधेनौँ बरु एक दिन दिदीले एउटा खाम दिएर संयमलाई कतै पठाउनु भयो । हामीले नसोधी दिदीले नै भन्नुभयो, “भाइबुहारी, तिमीहरुसँग लुकाउनुपर्ने केही कुरा छैन । हिजो म पार्टी कार्यालय गएकी थिएँ । मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै सांस्कृतिक फाँट हेर्नेले लाजै नमानी भने, तपाईको कुरा मैले र पार्टीले बुझेका छौँ तर पार्टीले कतिजनालाई प्राज्ञ बनाएर सक्छ । द्वन्द्व चर्केको बेलामा धेरैले पार्टीलाई सहयोग गरे त्यसमा तपाई पनि पर्नुहोला । तर अहिले पार्टीले केही गर्न सक्दैन भनेपछि मैले पनि भनिदिएँ, ठिकै छ, पार्टीले मेरो लागि केही गर्न नसके पनि विचार, युद्द र आन्दोलनसँगै देखेका परिवर्तन र मुक्तिका सबै सपनाहरुबाट म आज मुक्त भएँ, ती सबै कुराहरूसँग मेरो मोहभंग भयो । हेर भाइ बुहारी हो, त्यसैले मैले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी आज राजिनामा पठाएँ । अब अमुक पार्टीको म भोटर मात्रै रहन्छु । मैले मरेर लानुपर्ने केही छैन, मेरो श्रीमान, छोरो र मैले अंगालेको विचार त म मरेपछि पनि मसँगै जान्छ । ल अब तिमीहरु पनि जाओ र मलाई एक्लै रुन देउ, तिमीहरुको भिनाजु र भान्जा अर्थात् मेरो लोग्ने र मेरो एक्लो छोरो मारिँदा पनि मैले विचार र पार्टी भनेर रोकेको आँसुलाई आज म बगाई दिन्छु । तिमीहरु जाओ , मलाई निर्बिघ्न रुन देओ ।”
सिमान्त कथा लिएर आइन् विना थिङ
त्रिशूली वाङ्मय प्रतिष्ठानले भर्चुअल कवि गोष्ठी गर्ने